:::www.somalitalk.com::: Kaftandhable :Puntland sallad ninba maalin suuqa la aado
Kaftandhable :Puntland sallad ninba maalin suuqa la aado
Sallad ama Dambiil, ayaa qoyskii Soomaaliyeed ee meel dagan wax weyn ugu fadhiday, sida lawada xasuustana waxa subaxdii loosii walwaali jiray suuqa, iyadoo laga soo buuxin jiray quutulyoonka maalintaas la quudan jiray, Waxa kale oo dhici jirtay in mar mar si kale loo adeegsan jiray, halkii wax lagu soo qaadi jirayna inta la joojiyo, marka horeba lagu sii walwaali jiray alaab suuqgeyn ah oo qooska Soomaaliyeed maciishadooda ka soo saari jiray
Hadaba Salladda ama dambiishaas ayaan waxan oran karnay meel weyn ayay waxa ay ka joogtay nolasha qoyska Soomaaliyeed, kaalinteeduna ma aheyn mid la dhayalsan karo.
Ruuxa had iyo jeer Salladda u walwaali jiray suuqa ayaa waxa ay ahayd hooyada Soomaaliyeed, inagoo wada qireyna waxa hogaanka u ahaa aqalka Soomaaliyeed in hooyooyinka ahaayeen.
Aan u soo laabano Kaftan Dhablahayagan ku qotoma Salladda ama Dambiisha iyo sida aysan u aheyn wax laga maarmi karo, xataa hadii ay timaado magaca Dowladnimada, oo runtii aanba sheekadayadaan maanta kusoo ururinayno Salladda Puntland.
Salladdan Puntland ayaa waxaan ka bilaabaynaa markii Cade Muuse iyo Xertiisii ku Wareejinayeen Madaxweyne Faroole iyo xulufadiisa.
Afqurac: Cade iyo Gaagaabow Waar Hurgufa inta saladu ayan gacantayada ka bixin, waqee dhururuqna uusan ka heline!
Gaagaab: Dhururuq? aa !!! waar Cadaa dhinac walba uga baxay, ayadoo isku dhacsan oo dhinac iyo dheg wax celisa aan laheyna waatan, ninkii Faroole ahaa oo Salladdan u dhankin jirayse muxuu ka dheefi?
Cadde: Mar la arkaba Yaa in u wax ku dheefo ugu talagalay?, Gaagaabowse, waxa Salladdan ka dhigay weel dhex furan, oo aan waxba celin, sida Qumbe daloolshihiina uga dhex baxay, saw adiga maaheyn?
M/faroole: Dhex furnaantaas Cadow Mar, Hade waa Mar Cadow, Hade waa Mar Cadow, Hade waa Mar Cadow, dhinacayga ku keen?
Gaagaab: Fiiri, Fiiri, Fiiri waaba fara baxsi, Walee Waliyo in naloo ku yeero, ninkii waaya sii noolaadow waad arki doontaa, sansaan aan hore u gees galinay weeye waxa muuqda!
Afqurac: Waar anagu Dibiyo Daankooda uba shaqeysta ayaa aheyn ee Waxa Muuqdaa Gaagaaboow waxan u fahmay in aad u Jeedid Dhurwaa Hilbo ku raro?
Cadde: Oo Salladii u gacangalinaya Faroole ayaa yiri????
?Dhegteeda Qabo , waxbadan baa dhareerku kaaga da?ay Salladdan?e,?
Shacabkii: Oo goobta Sallada lagu kala qaadanayo ka agdhawaa ayaa yiri
Dhurwaayo marka dhurwaa wax ku hor cunaan dhareer in uu daadin su?aali kuma jirto taas.?
M/Faroole: Jawaabtiisii waxa ay noqotay ????.
?Dhareeri kuu fiicnaa, Dhidid iyo Dhiig in uu iigaba Dhamaaday, miyaa wax dahsoon aheyd??
Nuuradiin: Oo ka naxsan Foolxumada Salladan Faroole loo soo gacangashay ayaa yiri ????
?Waar Faroolow tani waa talaftay?e (Salladda) ee inta aananba suuq la aadin, aan karkarno dhego adag iyo sal aan dhexda mar dabe ka dhicin aan u sameyno??
Saleebaan: oo aan ka aragti fogeyn Nuuradiin ayaa yiri?..
Dee Waa Run?e hadii aanan la wada badeli Karin, kabkabku ka dari mahayo, inta mid kale lasoo gadi doono? waxanse la yaabay raggii Gaabgaabnaa ma dhulkay ku jiidi jireen Salladda, maxaa salka ka riday?
M/Faroole: Oo Gaabnaanshaha ka gubanaya ayaa u jawaabay Saleebaan, yirina ?.
Hadii Dherari Salladdan badbaadinayo Afqurac dhankuu ka hayay ayaad ka arki laheyd in ay samabaxdo, Gaabnaansho kuma xirna Saleebaanow, Dherarna waa kaas Afqurac hadii aad faa?iido ka raadinaysid.
Saleebaan: Oo gadaal ka ogaaday in Ninkani Gaabnida la wadaago ragii hore ayaa yiri ????.
Waar ileen adaaba Gaaabow kale ahaa, Wagar !!!!!!!!!, Walee Salladdani in aysan Salkadhac ka badbaadeyn inta rag Gaabani jiidahayaan?
Nuuradiin: Oo Quustay markuu ogaday in Salada aan waxba laga badaleyn ayaa yiri ?.
U maleynmaayo in Salladdan Dheg iyo sal wax cesha aan laheyn, kula walwaalayo M/Faroolow!.
Saleebaan: Oo mar walba la aragti ahaa Nuuradiin ayaa yiri?.
Anna Sidoo kale M/Faroolow, ee Foostadaan salka go?an Cidii kula dhaamin laheyd u Habar Waco!
M/Faroole: Oo qaadan waayay in loola yimaado in Sallada uu kabkabo ayaa isna yiri?..
Sangeyaal Salladdan iyo Suuqgeynteeda aan la socon, uguma horeysaane, ina kala weydaariya,
M/Faroole oo isla sii Nuunaasaya??.
,,,,,,,,, ?Waxey yiraahdeen Dheg u samee, ????.
??..see ugu sameeyaa Cadeba u sameyn waayee,??.
?..teeda kale Suuqyadii Cade la aadi jiray Salladdan hadii aan badalo amase kabkabo,
miyaa wax looga soo helayaa,???..
?? dheg gonaanta iyo salka isku furan waaba waxa ay caanka ku aheyd Salladdani,??.
?.. suuqyadana markii la arko xageedaa loosoo wada jeedsadaa,??..
???. in ay I wanjalaan ayay damceen Sangayadan aan wali indhofuran??.?
Xulufadii Faroole: Waa su?aalle, Salladdan maxaa lagu qaadi Jiray, oo dheg iyo dhinac tiray?
M/Faroole: War baydun hayn, alla war moogidinaa!!!!!!!!!! wax alla oo lagu qaadi jiray horta marka hore waa sadexjibaareynaa, marka xigtana wax aan waligeed lagu qaadin ayaan la damacsanahay in aan saaro, Eebe iyo Aniga ayaa is og waxan damacsanahay.
C/samad iyo Siciid Samatar: Anagaa ogooynoo dhagax iyo Ciidbaa ugu weynaa wixii Salladdan salka u riday!!!!
Ilka Jiir iyo Faarax Cali: Malahayaga wax kasii daran ayaa ayaa Salladdan Helay, marka aad eegtig sida lisan iyo Rifanku ugu dhacay?
M/Faroole: Miyaan idiin waramay wali? Warkayguse idinma galin miyaa?
War wax walba oo dheg jaray ama dhinac furay, aniga meel bay iigu dhigan yihiin,
Risanka iyo lifankana waxa keenay Dholowaa idinkagama waramin miyaa?,
Salladda dhuun Saliid ayaa ku fatahday!!!!!!!!!!!!
waxa talfiyayna waataas,
una maleyn mahayo, in ay dib danbe wax u ceshen karto,
idinna ha walwalina wax la idin weydiinayo majirtee,
Xisaab xirna salladdani in aysan laheyn waa in aad ogaataan.
Shacabkii: Waa Run oo Salladdani in ka badan 10SANNO ayay sal la?eyd,
Dhururuq iyo taanona waligeed ma ceshan,
maantana Ceshan mayso,
balse waxanoo dan ah in suuqyada subaxna aysan ka maqnaan, haba sal furnaatee!!!!!!!!!! Cajiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib.
Xanta Suuqa:1 ?Waa Sallad ninba maalin Suuqa la aado?
Xanta Suuqa2 : Maxaa Madaxweynuhu sadexjibaarayay hadiiba wali sal go?an tahay?
Maxaase kasii weyn Ciidii iyo Dhagxaantii Cadde ku salgooyay Salladdan?
M/Faroole: Wali Sallada salkeeda Go?an iyo sababteeda ayaa laga dhamaan waayay?
Waar Hadii Cadde Dhagax Sallada ku Suuqgeyn jiray, Annigu Buuraha ayaan ku suuqgeyndoonaa!!
Hadii Ciid iyo Batrool ku suuqgeyn jirayna, Badd iyo Berigaba waan ku suuqgeynayaa,
Kuna seexda in Salladani subaxna Suuqyada Caalamka ayan ka maqnaaneyn,
wax ay ahaatabana wax lagu suuqgeyndoono,
Balanse waxa ah in DADKA NOOL, aan Suuqgeynta ugu danbeysa ee Salladan lagu walwaalayo kaba dhigi Doono!!!!!!!!!!.........
Tixo isbarid ah oo shacabka ugu khudbeeyay M/Faroole
Warka ma sariigo sidii Cadee, Saafi ma u sheegay
Ma sifeeyay arartaydiyo, Halkay saarantahay seeftu
Sir iyo saaq,Sasab iyo salaax, Sarbeeb waqtiga lagu suusho
Ama Sooyaal iyo aduun laga warmoo, Laga saxiix qaato
Ama seeriwale iyo xeer dabar ahoo, Saanta laga qaadin
Intaba in ayan ii sugnaan, Duul allow saafi ma u sheegay
Sal furan In aan laygu iman, Duul allow saafi ma u sheegay
Sal furan in aan laygu iman, Duul allow saafi ma sheegay.
Sito iyo sal baa go?an hada,
Adna saableyda iyo sararaha weeye,
Waxaan kaa sugeyno in sarsarataa.
Shacabkii: Oo iyagu mar walba ku caanbaxay in sacabka iska tumaan, iyaga oo aadan garaneyn, waxa ay xeerinayaan, ayaa dhinac walba kuwo dan lihi ka bilaabeen sacab tunkoodii,
AYAGOO KU HADAAQAYA
Gudaha: Sacab, Kow, Labo, Sadex,
SAL FURAN SAA DOONTO KA YEEL
Dibada: Sacab, Kow, Labo, Sadex
M/Faroole: Oo aan shifeysaneyn sacabka Shacabka, ayaa waxa uu yiri,
?Waligiinba waa laydiin yaqaanaa, oo ninka wax xeeriya uma sacabtuntaan,
Sacabkiinan maantana, iima ahan wax aan ka aheyn SAMIR, aad ka qadeen Salladan, Markay ina Shiikh Maxamed u soo gacangashay,,,,,,,,,,,,,,, oo sarwaantiisa surgooyadeeda laga wado baqo,,,,,,,,,, saas baan rabaaa, hayskaayo seejinina.
Shacabkii: Sacabkoodii ayay iska sii wadaan, ayagoo hadalkii Madaxweyne Faroolena, runta ugu sheegay, si cad uwada maqlayay
Salladii: AYAA HADAL GOCOTAY IYADA OO RABTA DAREENKEEDA IYO SIDA AY WAX U ARAGTO IN AY MUUJISO, WAXA AYNA KU CABIRTAY TIXAHAN
Sawaabka I sitaa, Waxayga sii daran
Kuwa sacabkiyo, Salowga u tumoo
Midkii silciyaba, Sareeye u yahoo
Aan kala saarikareyn, Sax iyo qalad,
looga samiryay, laga samiryay, lagaa samiryay
Xanta Suuqa:6 Waxaan La aqoon Cida Samatabixnta ay ka sugeyso Salladan deegta maalinba nini u RIDANAHAYO.
looga samiryay, laga samiryay, lagaa samiryay Salladyahay
Muxiyadin Xuseen Ciid <alcarab1@yahoo.co.uk>